Umfazi wokuqala ukuba abe ngumlawuli wezokhenketho eGuyana
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » abantu » Umfazi wokuqala ukuba abe ngumlawuli wezokhenketho eGuyana
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba eziziiGuyana • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iindaba • abantu • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
UCarla James uba ngowokuqala ukuba ngumfazi wemveli ukuba anyulwe njengomphathi wezokhenketho eGuyana
The IGunya lezoKhenketho eGuyana (GTA) Kuluvuyo ukubhengeza ukuqeshwa kukaSekela Mlawuli, uCarla James, njengomlawuli wequmrhu lezokhenketho ukuqala nge-1 kaMeyi 2020. UNkosazana James uza kungena ezihlangwini zomlawuli wangoku, uBrian T. Mullis, emva kokugqitywa kwesivumelwano sakhe seminyaka emibini ngo-Epreli. 30, 2020 kwaye waba ngowokuqala ukuba ngumfazi womthonyama ukuba athathe isikhundla.
Unksz James, u-Akawaio oziqhenyayo noyinzalelwane yelali yase-Kamarang kwi-Upper Mazaruni Region (Ummandla 7), uchongwe ngamxhelo-mnye njengomgqatswa ophakamileyo nofanelekileyo ekupheleni kwenkqubo engqongqo yokukhetha amanqanaba amane eqhutywa yibhodi yabalawuli ye-arhente. . Ukutyunjwa kwakhe kukwabonisa umzuzu obalulekileyo kwimbali ye-GTA yeminyaka eli-18 njengoko esiba ngumfazi wokuqala wemveli ukuthatha inxaxheba -yinto ekufuneka iqatshelwe ngababhali-mbali bezentlalo kwaye ibhiyozelwa ngabantu bomthonyama kunye nabasetyhini bazo zonke izizwe kulo lonke elaseGuyana.
"Nksk. UJames ukulungele ngokukodwa ukukhokela indawo ekuyiwa kuyo eGuyana njengomlawuli wethu omtsha wezokhenketho, ”utshilo uDonald Sinclair, uSihlalo weBhodi yaBalawuli yeGunya lezoKhenketho eGuyana. “Kuyo sifumene inkokeli engazi nje kuphela ngobuchwephesha kwindawo esiya kuyo nakwicandelo lezoshishino, kodwa umntu onekratshi lesizwe nelifa lemveli, zombini ezi zinto zibalulekile ekomelezeni iqhinga lethu lezokhenketho ukuya phambili. Ukunyukela kwakhe kwindima yokuba ngumlawuli kuya kuba ngumthombo omkhulu wokhuthazo kumabhinqa amaninzi asematsha ngoku anobungqina bokuba abasetyhini bazo zonke izizwe banokuzichitha iisilingi kwaye baye apho bebesoyikisela ukunyathela ngaphambili ”
Kwisikhundla sakhe njengomlawuli, uNkosazana James uza kubolekisa ngamava okuphatha naweshishini, ngengxelo eqinisekisiweyo yokomeleza amaziko, ulawulo lwezemali, nokucwangcisela indawo ekuyiwa kuyo, ukuthengiswa kunye nolawulo, kuthatha iminyaka eli-19 kwikhondo lakhe lobungcali. Njengokuthweswa kwakhe isidanga kwiKholeji kaMongameli, uNks.James waqala umsebenzi wakhe ngo-2001 njengomncedisi wophando kwelo xesha lalinguMphathiswa Wezokhenketho, Ushishino kunye noRhwebo. Ngo-2003, wafudukela kwigunya lezokhenketho laseGuyana kwaye wajoyina iqela njengezibalo kunye negosa lophando. Kule minyaka ilandelayo, ubambe isikhundla seGosa eliPhezulu leeNkcukacha-manani kunye noPhando, uMphathi weNtengiso, uManejala woLungiselelo kunye noMncedisi woBuntu kuMlawuli weGunya, kwaye kutsha nje, uSekela Mlawuli weGunya lezoKhenketho eGuyana.
Ndizaliswe kukuzingca kunye nokufezekisa. Kube luhambo olumangalisayo lokufunda, ukufundela umsebenzi, uqeqesho kunye namava; kwaye ndonwabile kakhulu ukuthatha indima yoMlawuli weGunya lezoKhenketho eGuyana kwaye ndikhonze indawo endizingcayo ukuyibiza njengekhaya, ”wongeze uNksk. James, uSekela Mlawuli wangoku weGunya lezoKhenketho eGuyana. “Umsebenzi wethu udlala indima ebalulekileyo ekukhuseleni indalo yethu exabisekileyo yendalo kunye nezilwanyana zasendle kwaye luxanduva andiluthathi lula. Ngexesha apho uluntu lufuneka kakhulu, ndijonge phambili ekuxhaseni okwam ngokuqhubeka nokutyhalela phambili iDestination Guyana phambili kunye namaqabane ethu abalulekileyo. ”
Umlawuli omtsha uza kuthatha ubunkokeli ngexesha elilula nelona linamandla kwishishini lokhenketho lwehlabathi- ingxaki ye-COVID-19. Umsebenzi wakhe iya kuba kukukhokela iqela lakhe ngokuphumeza isicwangciso-qhinga sokubuyisela ishishini, ekwakhela kwinto esekwe kule minyaka idlulileyo kunye nokuzimisela ngokusekwe kwimo yesiqhelo yoshishino lokuhamba. Ibhodi yeGunya lezoKhenketho laseGuyana, umzimba wonke we-GTA kunye noMlawuli ophumayo, uBrian T. Mullis, bahlala bezithembile ukuba ubunkokheli bukaNks.James kunye nenkxaso eyomeleleyo iya kuvumela icandelo lezokhenketho le-GTA kunye nelaseGuyana ukuba loyise imiceli mngeni yangoku kwaye bakhele phezu kobukhulu obukhulu. Impumelelo ezuzwe kwiminyaka emibini edlulileyo.
Ezi mpumelelo zibandakanya amabhaso amaninzi kunye namagama athe anceda ukuqhubela phambili iGuyana kwiindawo eziphakamileyo kushishino lokhenketho nakwicandelo lokuzinza ngokukodwa. Ngo-2019 kuphela, iGuyana yabizwa njenge- # 1 'Eyona ndlela ihamba phambili kwezoKhenketho' kwi-ITB yaseBerlin, # 1 'Eyona ndawo ihamba phambili kwiKhenketho eliZinzileyo' kwii-LATA Achievement Awards, # 1 'Eyona ndawo ihamba phambili kwiNdawo yokuLawula' kwiNkqubo ye-CTO yoLondolozo lwezoKhenketho, kunye 'nokuKhokela okuKhokelela kuhambo oluZinzileyo' kwiNtengiso yeHlabathi yoKhenketho. Olu bizo lukhuthaze umdla kwilizwe elincinci lase Mzantsi Melika ngendlela engazange ibekho ngaphambili kwaye lakhokelela kwizintlu ezininzi kuluhlu lokuhamba lonyaka kunye nolunye udidi oluphezulu lokugubungela imithombo yeendaba ukubeka iGuyana njengendawo ephezulu yokundwendwela ngo-2020. Indawo ekuyiwa kuyo ikwafumene imbasa yayo yokuqala ye-2020. , ebizwa ngokuba ngu-2nd indawo ophumeleleyo kudidi 'oluPhambili lwaseMelika' liGreen Destinations Foundation.
Ngaphandle kwemiceli mngeni engaphambili yokubuyela kwimeko yesiqhelo Covid-19 Ngxubakaxaka, iGunya lezoKhenketho laseGuyana lihleli linethemba lokuba esi siseko somdla eGuyana siza koyisa njengoko abahambi befuna iindlela ezizinzileyo nezityebisayo zokuhlola umhlaba kamva kwi-2020 nangaphaya koko.